Garaad Cabdiqani ayaa ku tilmaamay wax fool xun ciidamada uu xiligan Col.Cabdulaahi Yuusuf uruurinayo
Buluugleey July 16,2005
Garaad Cabdiqani oo ka mid ah salaadiinta gobolka Sool ayaa ku tilmaamay wax aad u fool xun ahna wax aan la aqbali karin ciidamada uu Col. Cabdulaahi Yuusuf xiligan uruurinayo si uu weeraro shacabka ku dhaqan Muqdisho. Garaadka ayaa ku tilmaamy arrintan uu Col. Cabdullahi Yusuf ku kacayo wax khilaafsan hawshii laga sugayey.
Garaad Cabdiqani oo ku sugan magaalada Laascaano ee gobolka Sool ayaa wareysi uu siiey iddaacada HornAfrik waxa uu kaga hadley marxaladda siyaasadeed ee uu dalku marayo iyo waxa uu xilligan Col. Cabdulaahi Yuusuf ka wado magaalada Galkacyo oo maalmahan ku aruurinayo ciidamo la sheegay in uu ku damacsanyahay inuu ku weeraro Magaalada Muqdisho. Garaadka ayaa sheegay ineysan marnaba ogolaaneyn salaadiinta gobolka Sool in dagaal dalka laga huriyo.
Garaadka oo wareysigiisii ku sheegay in Col. Cabdullahi uu weli u muuqato jabhadeyntii uu cimrigiisa inta badan ku lumiyey. Hase yeeshee, ayuu yiri waxaa xilligan la joogo korneelku looga baahan yahay nabadeyn iyo dibuheshiisiin in dalka lagu soo dabaalo.
Garaad Cabdiqani ayaa ugu baaqey Col. Cabdulaahi Yuusuf inuu ku shaqeeyo magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. "Ma aha ayuu yiri Garaad Cabdiqani wax la aqbali karo waana wax aan waafaqsaneyn dastuurka in Col. Cabdullahi Yusuf ka baaqsado hawshii shacabka Soomaaliyeed ka rajeynayeen oo ah in ay dowladiisa soo celiso sharcigai iyo kala danbeyntii dowladnimo.
Col. Cabdullahi oo ah nin dagaal ayaa weli ku madax adag in farsamada siyasadeed uu dalka ku hogaaminayo tahay inuu markale wadanka Soomaliya ka huriyo dagaal sokeeye ee dhiig fara badan ku daatay.